လာမည့် MCU ရုပ်ရှင်ထဲတွင် Spider-Man သုံးယောက်လုံး subtitles October 20, 2020
လာမည့် MCU ရုပ်ရှင်ထဲတွင် Spider-Man သုံးယောက်လုံး subtitles
ယခုသီတင်းပတ်အတွင်း Spider-Man ဝန်းကျင်တွင်အင်တာနက်သည်ယိုစိမ့်မှုနှင့်ကောလဟာလများထွက်ပေါ်နေသည်3နှင့် Sony အမှုဆောင်များသည်သူတို့၏ကြီးမားသောအံ့အားသင့်စရာများကြောင့်စိတ်ပျက်လက်ပျက်ဖြစ်နေကြသည် Spider-man3ကိုလူအများကြားတွင်ပေါက်ကြားခဲ့သည် ဒီထိပ်တန်းလျှို့ဝှက်သတင်းအချက်အလက်ကဘာလဲနောက်ကွယ်မှာဘာလဲဒီနေ့ငါပြောပြမယ် ဤရက်သတ္တပတ်၏အထူးသတင်းပြန်လည်သိမ်းယူခြင်းဇာတ်လမ်းတို - ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်လူကင်းဖြစ်သည် Nerdfactory ဗွီဒီယိုအသစ်နှင့်သင်ကနောက်ဆုံးဖြစ်ရပ်များ၏ဤအကျဉ်းချုပ်ကိုသဘောကျလျှင် အဆိုပါမလိုလားဠာယခုကျွနု်ပ်ချန်နယ်မှ Subscribe နှင့်အတူရှိကဲ့သို့သောစွန့်ခွာလိုပဲ YouTube algorithm ကဤဗီဒီယိုအားထောက်ခံကြောင်းနားလည်သည်။ ယခုမူကားဘာသာရပ် - ဗီဒီယိုနဲ့စပါရစေ။ -Separator- ကောင်းပြီ - ယိုစိမ့်မှုတွေမရောက်ခင်မှာဘယ်လိုစတင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကြည့်ရအောင်။ ရှေ့တွင် လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်က Hollywood သတင်းထောက် Benedict Cumberbatch သည်အတူတကွနေထိုင်ကြောင်းတရားဝင်ကြေငြာခဲ့သည် Spider-Man နှင့်အတူကစားပါ၊ ယခင်ထုတ်မထားသောတတိယ Spider-Man အပိုင်း၌ပါ ဖြစ်လာသည်။ Spidey သည် MCU ရှိအခြားဇာတ်ကောင်များ၏ဘေးတွင်အမြဲရှိနေသောကြောင့်၎င်းသည်မအံ့သြသင့်ပါ MCU ၏အခြားရုပ်ရှင်၏ပရိသတ်များနှင့်ပရိသတ်များကိုဆွဲဆောင်ရန်အတွက်သာကစားခဲ့သည်။ ပထမတော့ Spider-Man ရုပ်ရှင်ကားတွေကြောင့်မင်းဟာမင်းလိုပဲထင်ရနိုင်တယ် Spidey ကတစ်ယောက်တည်းအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုတာကိုမယုံဘူး၊ ဒါပေမယ့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိုအဓိကထားတယ် MCU နှင့်ပေါင်းစည်းခြင်းနှင့်၎င်းအား Disney မှ Spider-Man အပေါ်နောက်ထပ်ဖိအားပေးခြင်း Sony ပိုင်ရှင်ဖြစ်သူ Sony ala“ ငါတို့ရဲ့ Spidey မရှိရင်ဘာမှမရှိဘူး” တကယ်ပဲဖြစ်သည် အလွန်ရုပ်ပြအမှတ်အသား။ တင်းပလိတ်များတွင် Spidey သည်နယူးယောက်နှင့်အခြားသူရဲကောင်းများနှင့်မကြာခဏထွက်လေ့ရှိသည် ၎င်းသည်လူတိုင်းမည်သည့်နေရာတွင်ရှိနေသည်ဆိုသည့်မေးခွန်းကိုလည်းအတန်ငယ်ဖယ်ရှားပေးသည် သူရဲကောင်းများသည်သူတို့၏ကမ္ဘာတစ်ခွင်တွင်ဖြစ်ရပ်များကိုမိမိတို့ဘာသာအဆုံးသတ်ကြသည်။ အကယ်၍ သင်စဉ်းစားမည်ဆိုလျှင်အခြားတစ်ဖက်တွင် Strange များသည်ဤနေရာတွင်အဓိပ္ပာယ်ရှိသည် ရုပ်ရှင်ကစားနေသည်။ အမည်ရ, ကတိုက်ရိုက်ပြည်တွင်းစစ်ကြီးခဲ့သောရူးသွပ်၏ Multiverse အောက်ပါအတိုင်း အဖြစ်အပျက်ရုပ်ရှင်ကဲ့သို့သောစီးရီး Flacon နှင့် Winter Soldier Wandavision ၌ပါလိမ့်မည် နှင့်အလားအလာ Loki လည်းထဲသို့ပြေး။ Strange သည်ယခုအခါ Black Panther နှင့် Thor တို့၏ဘေးတွင် MCU ၏အရေးအကြီးဆုံးလေယာဉ်တင်သင်္ဘောသို့မဟုတ်အနည်းဆုံးဖြစ်သည် နောက်အဆင့်မှာ Tony Stark ၏မှတ်ဉာဏ်ရှိသူကိုနားလည်စေရန်ဖြစ်သည် Beard Spidey သည်ဆရာအသစ်သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးနောက် Avengers အတွင်းလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဖြစ်လာသည်။ ငါပြောခဲ့သလိုပဲ - ဒီဟာ Sony ကကြေငြာချက်တစ်ခုဖြစ်ပြီးရုပ်ရှင်မှာပိုပြီးဖောင်းပွလာလိမ့်မယ် - ပြီးတော့ဒီနေရာမှာလည်းဆရာ Strange2ရဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကြောင့်ကြိုတင်တိုက်ရိုက်ပြောနိုင်တယ် Spider-man3မှာပထမဆုံးထင်မြင်ချက်ကိုသူမဟုတ်သည်ကိုသိလိမ့်မည် Spider-Men တော်တော်များများဟာ animation ရုပ်ရှင် Spider-verse နဲ့ဆင်တူတယ်။ နောက်ထပ်ဖော်ပြချက်တစ်ခုမှာ Jamie Foxx ၏ Electro ကိုကြေငြာခြင်းဖြစ်သည် Sony ၏ Spider-man3တွင်ပါ ၀ င်သင့်ကြောင်းမင်းသားကိုယ်တိုင်အတည်ပြုခဲ့သည် ၎င်းကိုပြီးခဲ့သည့်ရက်ကပယ်ဖျက်ခဲ့သော Instagram တင်ခြင်းတွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည် ပိုကောင်းနှင့်ကျိန်းသေအပြာမဟုတ်ပါလိမ့်မယ်။ သို့သော်၎င်းသည် SLEBEN ဟုသေချာစွာမဖော်ပြပါ Electro ဆိုတာကအတူတူပါပဲ။ ဂျေယောန Jamesson ဆင်တူလို့ပဲ Elektro မှာဒီနေရာမှာပဲမျက်နှာတစ်မျိုးစီရှိနိုင်ပေမယ့်ပုံရဲ့ကွဲပြားခြားနားချက်ကတော့ ဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်ထင်မြင်ချက်တွေပိုခိုင်မာလာတယ် multiverse နှင့်အလွန်ကွဲပြားခြားနားသောကြောင့်၎င်းနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောကြားမှာအနည်းငယ်ရှိသည် သူရဲကောင်းများလုပ်ရပေမည်။ cameos တွင်လူကြိုက်များသောသူရဲကောင်းများသည်အခြား version များထက်အခြားကောလာဟလများရှိနှင့်ပြီးဖြစ်သည် တိုနီ Stark၊ Captians America နှင့် Quick Silver အပါအ ၀ င်နောက်တဖန်ပေါ်ပေါက်လာနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် X-Men စကြာ ၀ inာတွင် Quicksilver ကိုကစားသောအီဗန်ပီတာစတာသည်ဓာတ်ပုံရိုက်ထားသူဖြစ်သည် Wandavision ရဲ့မြင်ကွင်းကိုအမျိုးသမီးတစ်ယောက်အဖြစ်အသွင်ပြောင်းထားတယ်။ ဒါပေမယ့်သူကတကယ်ပဲတကယ်ပဲဟုတ်ရဲ့လား Quicksilver - ဒါကြောင့် Wanda ရဲ့အစ်ကိုကကစားနေတုန်းပဲ။ -Separator- ကျွန်ုပ်တို့သည်တရား ၀ င်မဟုတ်သောအရာများသို့မရောက်မီကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်အရာတစ်ခုခုသည်တိုတောင်းပေလိမ့်မည် အရာ - လက်ရှိ YouTube နှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်ရုပ်ရှင်များနှင့်ရုပ်ရှင်များအပေါ်ဖောင်းပွခြင်း အမြဲတမ်းရပ်တန့်သွားတယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နောက်တွဲယာဉ်အသစ်တွေထွက်လာပြီးရုပ်ရှင်ပြန်ထွက်လာလို့ပါ အကြှနျုပျ၏ရုပ်သံလိုင်းသိသိသာသာလျော့နည်းအကြံပြုသည်။ ဆိုလိုတာကကျွန်တော်တို့ဟာအရည်အသွေးကောင်းတဲ့အရည်အသွေးကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုတွေနဲ့အများကြီးရိုက်ကြတာကိုဆိုလိုပါတယ် လုံ့လဝီရိယရှိရှိကြည့်ရှုရန်စာရင်းသွင်းထားသောသင့်အားလူတိုင်းအားပြသနိုင်မည်မဟုတ်ပါ ကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာအမြင်များနှင့် ၀ င်ငွေများကျဆင်းသွားစေသည့်လူသစ်များအားသေချာပေါက်အကြံပြုခြင်းမရှိပါ တူးမြောင်း၏။ ဒါကြောင့်ခင်ဗျားကငါ့ကိုဒီစူပါအရည်ရွှမ်းတဲ့အမြင်တွေရဖို့သာမကဘဲငါ့ကိုကူညီချင်ရင် ကျွန်တော့်ဗွီဒီယိုများကိုရယူပြီး၊ သူတို့နှင့်အတူလူသစ်များကိုလည်းကူညီလိုသည် ရုပ်သံလိုင်းကိုပြသခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်ကျစရိတ်များကိုဤနေရာတွင်ဆက်လက်ကျခံရန်သေချာစေရန် သင်ဤဗီဒီယိုနှင့်အနာဂတ်၌သင်တို့မြင်ရသမျှကိုကြိုက်နှစ်သက်ဆဲနိုင်သလား။ လူတိုင်းကဒီဟာကဗီဒီယိုကောင်းတယ်၊ အဲဒါကိုကျွန်တော်တို့ကိုရအောင်လုပ်ပေးတယ်၊ အကြံပြုချက်များသည်ရှေ့သို့ ဆက်၍ လျှောက်လှမ်းနေပါကသင်လုံလောက်ပါက၊ ဒီလက်ရှိအနိမ့်ထားနှင့်လည်းသင်တို့အဘို့ကြီးသောအကြောင်းအရာထုတ်လုပ်ရန်ဆက်လက် အသစ်သောရုပ်ရှင်ထွက်လာမယ့်။ သင်ပိုမိုကြိုက်နှစ်သက်မည့်မှတ်ချက်များတွင်ဗွီဒီယိုများအတွက်အကြံပြုချက်များကိုထားခဲ့ပါ လက်ရှိလာမယ့်အရာအဖြစ်ကတိပေးပါကကြောင့်ဖြစ်သင့်သည်။ ယခုမူကားအလုံအလောက် whining နှင့် သူတောင်းစား - နောက်သို့ဗီဒီယို! -Separator- ဒါပေမယ့်အခုတော့ကောလဟာလတွေထွက်လာပြီ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အရင်းအမြစ်တစ်ခုအရအရင်ပင့်ကူအမျိုးသားတွေရှိတယ် အခြား Sony Spider-man ရုပ်ရှင်စီးရီးမှယခုရုပ်ရှင်အသစ်အတွက်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ ဒီရင်းမြစ်ရဲ့အဆိုအရရုပ်ရှင်ရဲ့အဆုံးမှာသူတို့အနေနဲ့အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုအနေဖြင့်ကြီးမားတဲ့အထွတ်အထိပ်သို့ရောက်သင့်သည် Tom Holland ၏ Spider-man အသင်းကိုသရုပ်ဆောင်ထားသော Spider-Man ဗားရှင်းသည်လူဆိုးများစွာအားဆန့်ကျင်သည် တိုက်ပွဲ။ MCU ထဲကို ၀ င်လာပြီးမငြိမ်သက်မှုတွေဖြစ်စေတယ်။ Sony ကိုယ်တိုင်ကဒီကောလာဟလကိုအတည်ပြုလို့မရဘူး၊ သက်ဆိုင်ရာသရုပ်ဆောင်အတည်မပြုရသေးသည်။ ထို့အပြင်ဤစကြဝuniverseာတွင် Miles Morales ၏သွင်ပြင်နှင့်နိဒါန်းအကြောင်းကောလာဟလများလည်းဖြစ်သည် အဲ့ဒီ့နောက်မှာတော့အဲ့ဒီ့ကိုဖော်ပြတယ်။ လာမယ့်ရက်သတ္တပတ်များနှင့်လများအတွင်းဤဇာတ်ကားများအကြောင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ပိုမိုကြားသိရလိမ့်မည်။ တရားဝင်ရိုက်ကူးရေး YESTERDAY စတင်ခဲ့လို့ပဲ။ အဆိုပါရုပ်ရှင်ကိုနောက်ဒီဇင်ဘာလတွင်စီစဉ်ထားသည် ငါတို့ရှိသမျှသည်လက်ရှိအခြေအနေကိုသိသောကြောင့်, ငါတို့သံသယဆက်လက်ရန်ကြိုက်နှစ်သက်ပေမယ့်ပေါ်လာပါသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင်ဥရောပ၏အရေအတွက်တိုးများလာသည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်သည်ယခုရိုးရှင်းစွာယုံကြည်သည် လုံးဝမဖြန့်ချိသည့်ရက်စွဲ။ ရုပ်ရှင်၏အကြောင်းအရာများအတွက်ဆိုနီသည်ယခုနှစ်တွင်၎င်းသည်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုကြေငြာခဲ့ပြီးဖြစ်သည် သူတို့ရဲ့ Sony Universe of Marvel Character ကိုစဖွင့်ချင်တယ် ရုပ်ရှင်အားလုံး MCU (သို့) MCU ၏အစိတ်အပိုင်းများနှင့်အတူတကွအတူတကွပေါင်းဆုံကြသည် သင့်တယ် ဆိုလိုသည်မှာလာမည့် Venom ရုပ်ရှင်တွင် Spider-man နှင့်ဤရုပ်ရှင်၌ Venom ဖြစ်နိုင်သည် Spider-man ရုပ်ရှင်ကလုပ်နိုင်မှာပါ။ ကိုယ့် Venom ကြိုက်နှစ်သက်သည့် Morbius Spider-Man မတိုင်မှီ3ကိုဖြန့်ချိရန်စီစဉ်ထားပြီး Spider-man ၏ Plot Lines များကိုသေချာပေါက်စီစဉ်ထားသည် Vulture နှင့်သက်ဆိုင်သည့်ရုပ်ရှင်များသည်ဤသက်တမ်းရှိသောစကြဝuniverseာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုယူဆရသည် ဆိုနီအိမ်တွင်နေပါ။ ရလဒ်အနေဖြင့်ဆိုနီသည်၎င်းတို့၏လူကြိုက်အများဆုံးဇာတ်ကောင်များကိုဖောင်းပွမှုတည်ဆောက်ရန်သာမကဆက်သွယ်မှုများကိုပါဖန်တီးပေးခဲ့သည် ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အချိန်တွင်အအောင်မြင်ဆုံးဂိမ်းနှင့် Spider-man နှင့်ဖန်တီးသည်3ဖြစ်နိုင်သည်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်နည်းနည်း endgame ကဲ့သို့ဖောင်းပွယခင်ရုပ်ရှင်များတွင်ကြောင်း spike တည်ဆောက်နေဆဲဖြစ်ပြီး MCU ရုပ်ရှင်ကားများကတိုးချဲ့လျက်ရှိသည်။ ၎င်းသည်ယခင် MCU ရုပ်ရှင်များအပါအ ၀ င် Spider-man ပန်ကာတိုင်းအတွက်မဖြစ်မနေလိုအပ်သည် Sony Strider Universe ၏ Doctor Strange 2s သမိုင်းမတိုင်ခင်စိတ်ဝင်စားသူများအားလုံးကြည့်ရှုရန် ကြည့်ရှုရန်ရုပ်ရှင်။ ၎င်းသည်မယုံနိုင်လောက်အောင်လိမ္မာပါးနပ်သောလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဖြစ်သည် Raimi Spider-man ရုပ်ရှင်ကားများ၏ပရိသတ်များနှင့် Andrew Garfield ၏ Spider-man ရုပ်ရှင်ဗားရှင်းများရပ်တန့်သွားသည် Lure, ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့ကိုသူတို့ထဲကတစ်ခုခုကိုနှင့်အတူစစ်မှန်သောသဘောတူညီချက်မဟုတ်, ဒါပေမယ့် teasers ရုပ်ရှင်တွေပိုများလာတာဟာတကယ့်ကိုကောင်းတဲ့လှုပ်ရှားမှုပါ။ Sony သည်၎င်းကိုအတည်ပြုခြင်းမရှိကြောင်းမေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်လာသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ကိုကြီးမားသောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးလှုပ်ရှားမှုဖြစ်လိမ့်မည် ဒါပေမယ့်ငါစိတ်ကူးကြည့်နိုင်တယ်၊ ကောလဟာလတွေမှန်ရင်မင်းသရုပ်ဆောင်တွေတကယ်ပဲလုပ်တယ် အလွန်တိုတောင်းသောသူတို့သာသူတို့ထံမှမျှော်လင့်ထားသည့်၎င်းတို့၏ကြီးမားသောအခန်းကဏ္ instead အစားအစား cameos သာရ အလိုတော် တ ဦး တည်းမှာ Tom's Spidey မတိုင်မီတတိယမြောက်လုပ်ရပ်၌သာဖြစ်သည် နှင့်အလားအလာမိုင် Morales လှည့်။ အကယ်၍ ဒီလိုမျိုးဖြစ်ပျက်လာရင်၊ သက်ကြီးရွယ်အို ၂ ယောက်ကိုဖြစ်နိုင်တယ် အရောင်းအ ၀ ယ်အလွန်နောက်ကျသောရူးသွပ်ခြင်းကိုကျန်းမာရေးနှင့်မညီညွတ်သည့်အဖြစ်ကြီးကြီးမားမားနှင့်ဒုတိယအစောဆုံးအချိန်တွင်စဉ်းစားခဲ့ကြသည် သို့မဟုတ်ရုပ်ရှင်အဘို့အတတိယနောက်တွဲယာဉ်ကိုမဖြန့်ချိမီမကြာမီကဲ့ရဲ့ရပါမည်။ Sony ကသူတို့ရဲ့ trailers တွေကိုဘယ်လိုဒီဇိုင်းလုပ်ပုံကိုစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်၊ - ဒါပေမယ့်ရုပ်ရှင်မထွက်ခင်လနဲ့လအနည်းငယ်မကပါ။ သို့သော်သတိရပါ - လက်ရှိတွင်ကောလဟာလများသာမဟုတ်၊ အချို့သူများကအခြားသူများထက် ပို၍ ယုတ္တိတန်သည်ဟုဆိုရမည် သူတို့ကိုယ်သူတို့အတည်ပြုမယ်ဆိုရင်အေးအေးဆေးဆေးပဲ - Snoke ဟာတကယ်တော့ Darth လည်းမဟုတ်ဘူး Tony Stark သည် Vader ၏အမှောင်ထုနှင့် Mace Windu ၏သားမဟုတ်သည့် Finn ဖြစ်သည် Infinity ဟာမသေဆုံးသေးပါဘူး။ Mysterio ဟာနောက်ဆုံးတော့မကောင်းတဲ့ကောင်ပဲ အခြားစကြာ ၀ universeာ။ ဒီရုပ်ရှင်အမျိုးအစားမှရုပ်ရှင်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောလဟာလများစွာနဲ့ထင်မြင်ချက်တွေကတိကျမှန်ကန်နေဆဲဖြစ်သည် ကောလာဟလများနှင့်ထင်မြင်ချက်များ။ ဒီတော့ဒါကိုမျှော်လင့်ခြင်းတစ်ခုအဖြစ်မယူမှတ်ပါနှင့် Tobey Maguire နှင့် Andrew Garfield တို့သည်ဤနေရာတွင်ကစားနေသည်။ Venom နှင့် Sony Spider-Man Cinematic Universe မှဇာတ်ကောင်များ၏ကျန် ငါကအကြောင်းအများကြီးပိုပြီးယုံကြည်မှုပါပဲ။ သင်ဘယ်လိုထင်ပါလဲ? ယိုစိမ့်မှုတစ်ခုခုရှိပါသလား။ ယုံကြည်သည် ဤကဲ့သို့သောရုပ်ရှင်ကိုတည်ဆောက်ခြင်းသည်အဓိပ္ပာယ်ရှိသလောသို့မဟုတ်အလွန်ရှုပ်ထွေးစေသည်။ မှတ်ချက်များတွင်ကျွန်ုပ်အားအသိပေးပါ။ algorithm အတွက်ဗီဒီယိုကိုကြိုက်နှစ်သက်ရန်မမေ့ပါနှင့် ဒီဗီဒီယိုကိုထောက်ခံသင့်တယ်ဆိုတာပြသနိုင်ဖို့မဟုတ်ရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းအတွက်နောက်တစ်ခေါက်သင့်ကိုတွေ့လိမ့်မည် - rinjehaun!
လာမည့် MCU ရုပ်ရှင်ထဲတွင် Spider-Man သုံးယောက်လုံး
<text sub="clublinks" start="0.099" dur="4.791">ယခုသီတင်းပတ်အတွင်း Spider-Man ဝန်းကျင်တွင်အင်တာနက်သည်ယိုစိမ့်မှုနှင့်ကောလဟာလများထွက်ပေါ်နေသည်</text>
<text sub="clublinks" start="4.89" dur="5.42">3နှင့် Sony အမှုဆောင်များသည်သူတို့၏ကြီးမားသောအံ့အားသင့်စရာများကြောင့်စိတ်ပျက်လက်ပျက်ဖြစ်နေကြသည်</text>
<text sub="clublinks" start="10.31" dur="2.71"> Spider-man3ကိုလူအများကြားတွင်ပေါက်ကြားခဲ့သည်</text>
<text sub="clublinks" start="13.02" dur="3.44"> ဒီထိပ်တန်းလျှို့ဝှက်သတင်းအချက်အလက်ကဘာလဲနောက်ကွယ်မှာဘာလဲဒီနေ့ငါပြောပြမယ်</text>
<text sub="clublinks" start="16.46" dur="4.462"> ဤရက်သတ္တပတ်၏အထူးသတင်းပြန်လည်သိမ်းယူခြင်းဇာတ်လမ်းတို - ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်လူကင်းဖြစ်သည်</text>
<text sub="clublinks" start="20.922" dur="4.258"> Nerdfactory ဗွီဒီယိုအသစ်နှင့်သင်ကနောက်ဆုံးဖြစ်ရပ်များ၏ဤအကျဉ်းချုပ်ကိုသဘောကျလျှင်</text>
<text sub="clublinks" start="25.18" dur="4.019"> အဆိုပါမလိုလားဠာယခုကျွနု်ပ်ချန်နယ်မှ Subscribe နှင့်အတူရှိကဲ့သို့သောစွန့်ခွာလိုပဲ</text>
<text sub="clublinks" start="29.199" dur="3.95"> YouTube algorithm ကဤဗီဒီယိုအားထောက်ခံကြောင်းနားလည်သည်။ ယခုမူကားဘာသာရပ်</text>
<text sub="clublinks" start="33.149" dur="2.131"> - ဗီဒီယိုနဲ့စပါရစေ။</text>
<text sub="clublinks" start="36.28" dur="4.959"> ကောင်းပြီ - ယိုစိမ့်မှုတွေမရောက်ခင်မှာဘယ်လိုစတင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကြည့်ရအောင်။ ရှေ့တွင်</text>
<text sub="clublinks" start="41.239" dur="4.082"> လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်က Hollywood သတင်းထောက် Benedict Cumberbatch သည်အတူတကွနေထိုင်ကြောင်းတရားဝင်ကြေငြာခဲ့သည်</text>
<text sub="clublinks" start="45.321" dur="5.099"> Spider-Man နှင့်အတူကစားပါ၊ ယခင်ထုတ်မထားသောတတိယ Spider-Man အပိုင်း၌ပါ</text>
<text sub="clublinks" start="50.42" dur="1.15"> ဖြစ်လာသည်။</text>
<text sub="clublinks" start="51.57" dur="5.899"> Spidey သည် MCU ရှိအခြားဇာတ်ကောင်များ၏ဘေးတွင်အမြဲရှိနေသောကြောင့်၎င်းသည်မအံ့သြသင့်ပါ</text>
<text sub="clublinks" start="57.469" dur="6.26"> MCU ၏အခြားရုပ်ရှင်၏ပရိသတ်များနှင့်ပရိသတ်များကိုဆွဲဆောင်ရန်အတွက်သာကစားခဲ့သည်။</text>
<text sub="clublinks" start="63.729" dur="4.291"> ပထမတော့ Spider-Man ရုပ်ရှင်ကားတွေကြောင့်မင်းဟာမင်းလိုပဲထင်ရနိုင်တယ်</text>
<text sub="clublinks" start="68.02" dur="3.919"> Spidey ကတစ်ယောက်တည်းအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုတာကိုမယုံဘူး၊ ဒါပေမယ့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိုအဓိကထားတယ်</text>
<text sub="clublinks" start="71.939" dur="6.29"> MCU နှင့်ပေါင်းစည်းခြင်းနှင့်၎င်းအား Disney မှ Spider-Man အပေါ်နောက်ထပ်ဖိအားပေးခြင်း</text>
<text sub="clublinks" start="78.229" dur="5.841"> Sony ပိုင်ရှင်ဖြစ်သူ Sony ala“ ငါတို့ရဲ့ Spidey မရှိရင်ဘာမှမရှိဘူး” တကယ်ပဲဖြစ်သည်</text>
<text sub="clublinks" start="84.07" dur="2.36"> အလွန်ရုပ်ပြအမှတ်အသား။</text>
<text sub="clublinks" start="86.43" dur="4.869"> တင်းပလိတ်များတွင် Spidey သည်နယူးယောက်နှင့်အခြားသူရဲကောင်းများနှင့်မကြာခဏထွက်လေ့ရှိသည်</text>
<text sub="clublinks" start="91.299" dur="3.951"> ၎င်းသည်လူတိုင်းမည်သည့်နေရာတွင်ရှိနေသည်ဆိုသည့်မေးခွန်းကိုလည်းအတန်ငယ်ဖယ်ရှားပေးသည်</text>
<text sub="clublinks" start="95.25" dur="3.359"> သူရဲကောင်းများသည်သူတို့၏ကမ္ဘာတစ်ခွင်တွင်ဖြစ်ရပ်များကိုမိမိတို့ဘာသာအဆုံးသတ်ကြသည်။</text>
<text sub="clublinks" start="98.609" dur="4.651"> အကယ်၍ သင်စဉ်းစားမည်ဆိုလျှင်အခြားတစ်ဖက်တွင် Strange များသည်ဤနေရာတွင်အဓိပ္ပာယ်ရှိသည်</text>
<text sub="clublinks" start="103.26" dur="5.45"> ရုပ်ရှင်ကစားနေသည်။ အမည်ရ, ကတိုက်ရိုက်ပြည်တွင်းစစ်ကြီးခဲ့သောရူးသွပ်၏ Multiverse အောက်ပါအတိုင်း</text>
<text sub="clublinks" start="108.71" dur="5.619"> အဖြစ်အပျက်ရုပ်ရှင်ကဲ့သို့သောစီးရီး Flacon နှင့် Winter Soldier Wandavision ၌ပါလိမ့်မည်</text>
<text sub="clublinks" start="114.329" dur="2.191"> နှင့်အလားအလာ Loki လည်းထဲသို့ပြေး။</text>
<text sub="clublinks" start="116.52" dur="5.019"> Strange သည်ယခုအခါ Black Panther နှင့် Thor တို့၏ဘေးတွင် MCU ၏အရေးအကြီးဆုံးလေယာဉ်တင်သင်္ဘောသို့မဟုတ်အနည်းဆုံးဖြစ်သည်</text>
<text sub="clublinks" start="121.539" dur="4.87"> နောက်အဆင့်မှာ Tony Stark ၏မှတ်ဉာဏ်ရှိသူကိုနားလည်စေရန်ဖြစ်သည်</text>
<text sub="clublinks" start="126.409" dur="7.491"> Beard Spidey သည်ဆရာအသစ်သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးနောက် Avengers အတွင်းလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဖြစ်လာသည်။</text>
<text sub="clublinks" start="133.9" dur="6.44"> ငါပြောခဲ့သလိုပဲ - ဒီဟာ Sony ကကြေငြာချက်တစ်ခုဖြစ်ပြီးရုပ်ရှင်မှာပိုပြီးဖောင်းပွလာလိမ့်မယ်</text>
<text sub="clublinks" start="140.34" dur="4.58"> - ပြီးတော့ဒီနေရာမှာလည်းဆရာ Strange2ရဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကြောင့်ကြိုတင်တိုက်ရိုက်ပြောနိုင်တယ်</text>
<text sub="clublinks" start="144.92" dur="4.94"> Spider-man3မှာပထမဆုံးထင်မြင်ချက်ကိုသူမဟုတ်သည်ကိုသိလိမ့်မည်</text>
<text sub="clublinks" start="149.86" dur="6.14"> Spider-Men တော်တော်များများဟာ animation ရုပ်ရှင် Spider-verse နဲ့ဆင်တူတယ်။</text>
<text sub="clublinks" start="156" dur="4.691"> နောက်ထပ်ဖော်ပြချက်တစ်ခုမှာ Jamie Foxx ၏ Electro ကိုကြေငြာခြင်းဖြစ်သည်</text>
<text sub="clublinks" start="160.691" dur="4.169"> Sony ၏ Spider-man3တွင်ပါ ၀ င်သင့်ကြောင်းမင်းသားကိုယ်တိုင်အတည်ပြုခဲ့သည်</text>
<text sub="clublinks" start="164.86" dur="5.46"> ၎င်းကိုပြီးခဲ့သည့်ရက်ကပယ်ဖျက်ခဲ့သော Instagram တင်ခြင်းတွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်</text>
<text sub="clublinks" start="170.32" dur="3.68"> ပိုကောင်းနှင့်ကျိန်းသေအပြာမဟုတ်ပါလိမ့်မယ်။</text>
<text sub="clublinks" start="174" dur="5.18"> သို့သော်၎င်းသည် SLEBEN ဟုသေချာစွာမဖော်ပြပါ</text>
<text sub="clublinks" start="179.18" dur="5.18"> Electro ဆိုတာကအတူတူပါပဲ။ ဂျေယောန Jamesson ဆင်တူလို့ပဲ</text>
<text sub="clublinks" start="184.36" dur="5.32"> Elektro မှာဒီနေရာမှာပဲမျက်နှာတစ်မျိုးစီရှိနိုင်ပေမယ့်ပုံရဲ့ကွဲပြားခြားနားချက်ကတော့</text>
<text sub="clublinks" start="189.68" dur="1"> ဖြစ်လိမ့်မည်။</text>
<text sub="clublinks" start="190.68" dur="4.23"> ဒါကြောင့်ထင်မြင်ချက်တွေပိုခိုင်မာလာတယ်</text>
<text sub="clublinks" start="194.91" dur="5.14"> multiverse နှင့်အလွန်ကွဲပြားခြားနားသောကြောင့်၎င်းနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောကြားမှာအနည်းငယ်ရှိသည်</text>
<text sub="clublinks" start="200.05" dur="1.47"> သူရဲကောင်းများလုပ်ရပေမည်။</text>
<text sub="clublinks" start="201.52" dur="4.72"> cameos တွင်လူကြိုက်များသောသူရဲကောင်းများသည်အခြား version များထက်အခြားကောလာဟလများရှိနှင့်ပြီးဖြစ်သည်</text>
<text sub="clublinks" start="206.24" dur="2.86"> တိုနီ Stark၊ Captians America နှင့် Quick Silver အပါအ ၀ င်နောက်တဖန်ပေါ်ပေါက်လာနိုင်သည်။</text>
<text sub="clublinks" start="209.1" dur="1"> ဥပမာအားဖြင့် X-Men စကြာ ၀ inာတွင် Quicksilver ကိုကစားသောအီဗန်ပီတာစတာသည်ဓာတ်ပုံရိုက်ထားသူဖြစ်သည်</text>
<text sub="clublinks" start="210.1" dur="1.08"> Wandavision ရဲ့မြင်ကွင်းကိုအမျိုးသမီးတစ်ယောက်အဖြစ်အသွင်ပြောင်းထားတယ်။ ဒါပေမယ့်သူကတကယ်ပဲတကယ်ပဲဟုတ်ရဲ့လား</text>
<text sub="clublinks" start="211.18" dur="1.59"> Quicksilver - ဒါကြောင့် Wanda ရဲ့အစ်ကိုကကစားနေတုန်းပဲ။</text>
<text sub="clublinks" start="213.77" dur="2.43"> ကျွန်ုပ်တို့သည်တရား ၀ င်မဟုတ်သောအရာများသို့မရောက်မီကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်အရာတစ်ခုခုသည်တိုတောင်းပေလိမ့်မည်</text>
<text sub="clublinks" start="216.2" dur="3.34"> အရာ - လက်ရှိ YouTube နှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်ရုပ်ရှင်များနှင့်ရုပ်ရှင်များအပေါ်ဖောင်းပွခြင်း</text>
<text sub="clublinks" start="219.54" dur="4.13"> အမြဲတမ်းရပ်တန့်သွားတယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နောက်တွဲယာဉ်အသစ်တွေထွက်လာပြီးရုပ်ရှင်ပြန်ထွက်လာလို့ပါ</text>
<text sub="clublinks" start="223.67" dur="4.33"> အကြှနျုပျ၏ရုပ်သံလိုင်းသိသိသာသာလျော့နည်းအကြံပြုသည်။</text>
<text sub="clublinks" start="228" dur="3.14"> ဆိုလိုတာကကျွန်တော်တို့ဟာအရည်အသွေးကောင်းတဲ့အရည်အသွေးကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုတွေနဲ့အများကြီးရိုက်ကြတာကိုဆိုလိုပါတယ်</text>
<text sub="clublinks" start="231.14" dur="5.12"> လုံ့လဝီရိယရှိရှိကြည့်ရှုရန်စာရင်းသွင်းထားသောသင့်အားလူတိုင်းအားပြသနိုင်မည်မဟုတ်ပါ</text>
<text sub="clublinks" start="236.26" dur="4.36"> ကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာအမြင်များနှင့် ၀ င်ငွေများကျဆင်းသွားစေသည့်လူသစ်များအားသေချာပေါက်အကြံပြုခြင်းမရှိပါ</text>
<text sub="clublinks" start="240.62" dur="1"> တူးမြောင်း၏။</text>
<text sub="clublinks" start="241.62" dur="3.56"> ဒါကြောင့်ခင်ဗျားကငါ့ကိုဒီစူပါအရည်ရွှမ်းတဲ့အမြင်တွေရဖို့သာမကဘဲငါ့ကိုကူညီချင်ရင်</text>
<text sub="clublinks" start="245.18" dur="3.63"> ကျွန်တော့်ဗွီဒီယိုများကိုရယူပြီး၊ သူတို့နှင့်အတူလူသစ်များကိုလည်းကူညီလိုသည်</text>
<text sub="clublinks" start="248.81" dur="3.53"> ရုပ်သံလိုင်းကိုပြသခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်ကျစရိတ်များကိုဤနေရာတွင်ဆက်လက်ကျခံရန်သေချာစေရန်</text>
<text sub="clublinks" start="252.34" dur="5.51"> သင်ဤဗီဒီယိုနှင့်အနာဂတ်၌သင်တို့မြင်ရသမျှကိုကြိုက်နှစ်သက်ဆဲနိုင်သလား။</text>
<text sub="clublinks" start="257.85" dur="3.78"> လူတိုင်းကဒီဟာကဗီဒီယိုကောင်းတယ်၊ အဲဒါကိုကျွန်တော်တို့ကိုရအောင်လုပ်ပေးတယ်၊</text>
<text sub="clublinks" start="261.63" dur="4.09"> အကြံပြုချက်များသည်ရှေ့သို့ ဆက်၍ လျှောက်လှမ်းနေပါကသင်လုံလောက်ပါက၊</text>
<text sub="clublinks" start="265.72" dur="4.25"> ဒီလက်ရှိအနိမ့်ထားနှင့်လည်းသင်တို့အဘို့ကြီးသောအကြောင်းအရာထုတ်လုပ်ရန်ဆက်လက်</text>
<text sub="clublinks" start="269.97" dur="1.69"> အသစ်သောရုပ်ရှင်ထွက်လာမယ့်။</text>
<text sub="clublinks" start="271.66" dur="4.47"> သင်ပိုမိုကြိုက်နှစ်သက်မည့်မှတ်ချက်များတွင်ဗွီဒီယိုများအတွက်အကြံပြုချက်များကိုထားခဲ့ပါ</text>
<text sub="clublinks" start="276.13" dur="6.15"> လက်ရှိလာမယ့်အရာအဖြစ်ကတိပေးပါကကြောင့်ဖြစ်သင့်သည်။ ယခုမူကားအလုံအလောက် whining နှင့်</text>
<text sub="clublinks" start="282.28" dur="2.06"> သူတောင်းစား - နောက်သို့ဗီဒီယို!</text>
<text sub="clublinks" start="285.34" dur="5.54"> ဒါပေမယ့်အခုတော့ကောလဟာလတွေထွက်လာပြီ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အရင်းအမြစ်တစ်ခုအရအရင်ပင့်ကူအမျိုးသားတွေရှိတယ်</text>
<text sub="clublinks" start="290.88" dur="5.28"> အခြား Sony Spider-man ရုပ်ရှင်စီးရီးမှယခုရုပ်ရှင်အသစ်အတွက်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။</text>
<text sub="clublinks" start="296.16" dur="5.9"> ဒီရင်းမြစ်ရဲ့အဆိုအရရုပ်ရှင်ရဲ့အဆုံးမှာသူတို့အနေနဲ့အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုအနေဖြင့်ကြီးမားတဲ့အထွတ်အထိပ်သို့ရောက်သင့်သည်</text>
<text sub="clublinks" start="302.06" dur="4.25"> Tom Holland ၏ Spider-man အသင်းကိုသရုပ်ဆောင်ထားသော Spider-Man ဗားရှင်းသည်လူဆိုးများစွာအားဆန့်ကျင်သည်</text>
<text sub="clublinks" start="306.31" dur="4.7"> တိုက်ပွဲ။ MCU ထဲကို ၀ င်လာပြီးမငြိမ်သက်မှုတွေဖြစ်စေတယ်။</text>
<text sub="clublinks" start="311.01" dur="5.84"> Sony ကိုယ်တိုင်ကဒီကောလာဟလကိုအတည်ပြုလို့မရဘူး၊</text>
<text sub="clublinks" start="316.85" dur="3.47"> သက်ဆိုင်ရာသရုပ်ဆောင်အတည်မပြုရသေးသည်။</text>
<text sub="clublinks" start="320.32" dur="4.97"> ထို့အပြင်ဤစကြဝuniverseာတွင် Miles Morales ၏သွင်ပြင်နှင့်နိဒါန်းအကြောင်းကောလာဟလများလည်းဖြစ်သည်</text>
<text sub="clublinks" start="325.29" dur="4.78"> အဲ့ဒီ့နောက်မှာတော့အဲ့ဒီ့ကိုဖော်ပြတယ်။</text>
<text sub="clublinks" start="330.07" dur="4.25"> လာမယ့်ရက်သတ္တပတ်များနှင့်လများအတွင်းဤဇာတ်ကားများအကြောင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ပိုမိုကြားသိရလိမ့်မည်။</text>
<text sub="clublinks" start="334.32" dur="4.55"> တရားဝင်ရိုက်ကူးရေး YESTERDAY စတင်ခဲ့လို့ပဲ။ အဆိုပါရုပ်ရှင်ကိုနောက်ဒီဇင်ဘာလတွင်စီစဉ်ထားသည်</text>
<text sub="clublinks" start="338.87" dur="4.24"> ငါတို့ရှိသမျှသည်လက်ရှိအခြေအနေကိုသိသောကြောင့်, ငါတို့သံသယဆက်လက်ရန်ကြိုက်နှစ်သက်ပေမယ့်ပေါ်လာပါသည်</text>
<text sub="clublinks" start="343.11" dur="4.69"> ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင်ဥရောပ၏အရေအတွက်တိုးများလာသည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်သည်ယခုရိုးရှင်းစွာယုံကြည်သည်</text>
<text sub="clublinks" start="347.8" dur="1.97"> လုံးဝမဖြန့်ချိသည့်ရက်စွဲ။</text>
<text sub="clublinks" start="349.77" dur="5.22"> ရုပ်ရှင်၏အကြောင်းအရာများအတွက်ဆိုနီသည်ယခုနှစ်တွင်၎င်းသည်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုကြေငြာခဲ့ပြီးဖြစ်သည်</text>
<text sub="clublinks" start="354.99" dur="7.41"> သူတို့ရဲ့ Sony Universe of Marvel Character ကိုစဖွင့်ချင်တယ်</text>
<text sub="clublinks" start="362.4" dur="6.93"> ရုပ်ရှင်အားလုံး MCU (သို့) MCU ၏အစိတ်အပိုင်းများနှင့်အတူတကွအတူတကွပေါင်းဆုံကြသည်</text>
<text sub="clublinks" start="369.33" dur="1"> သင့်တယ်</text>
<text sub="clublinks" start="370.33" dur="3.95"> ဆိုလိုသည်မှာလာမည့် Venom ရုပ်ရှင်တွင် Spider-man နှင့်ဤရုပ်ရှင်၌ Venom ဖြစ်နိုင်သည်</text>
<text sub="clublinks" start="374.28" dur="5.68"> Spider-man ရုပ်ရှင်ကလုပ်နိုင်မှာပါ။ ကိုယ့် Venom ကြိုက်နှစ်သက်သည့် Morbius</text>
<text sub="clublinks" start="379.96" dur="4.28"> Spider-Man မတိုင်မှီ3ကိုဖြန့်ချိရန်စီစဉ်ထားပြီး Spider-man ၏ Plot Lines များကိုသေချာပေါက်စီစဉ်ထားသည်</text>
<text sub="clublinks" start="384.24" dur="5.91"> Vulture နှင့်သက်ဆိုင်သည့်ရုပ်ရှင်များသည်ဤသက်တမ်းရှိသောစကြဝuniverseာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုယူဆရသည်</text>
<text sub="clublinks" start="390.15" dur="2.56"> ဆိုနီအိမ်တွင်နေပါ။</text>
<text sub="clublinks" start="392.71" dur="5.679"> ရလဒ်အနေဖြင့်ဆိုနီသည်၎င်းတို့၏လူကြိုက်အများဆုံးဇာတ်ကောင်များကိုဖောင်းပွမှုတည်ဆောက်ရန်သာမကဆက်သွယ်မှုများကိုပါဖန်တီးပေးခဲ့သည်</text>
<text sub="clublinks" start="398.389" dur="4.721"> ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အချိန်တွင်အအောင်မြင်ဆုံးဂိမ်းနှင့် Spider-man နှင့်ဖန်တီးသည်</text>
<text sub="clublinks" start="403.11" dur="8.35">3ဖြစ်နိုင်သည်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်နည်းနည်း endgame ကဲ့သို့ဖောင်းပွယခင်ရုပ်ရှင်များတွင်ကြောင်း spike</text>
<text sub="clublinks" start="411.46" dur="4.989"> တည်ဆောက်နေဆဲဖြစ်ပြီး MCU ရုပ်ရှင်ကားများကတိုးချဲ့လျက်ရှိသည်။</text>
<text sub="clublinks" start="416.449" dur="4.311"> ၎င်းသည်ယခင် MCU ရုပ်ရှင်များအပါအ ၀ င် Spider-man ပန်ကာတိုင်းအတွက်မဖြစ်မနေလိုအပ်သည်</text>
<text sub="clublinks" start="420.76" dur="5.25"> Sony Strider Universe ၏ Doctor Strange 2s သမိုင်းမတိုင်ခင်စိတ်ဝင်စားသူများအားလုံးကြည့်ရှုရန်</text>
<text sub="clublinks" start="426.01" dur="1"> ကြည့်ရှုရန်ရုပ်ရှင်။</text>
<text sub="clublinks" start="427.01" dur="4.1"> ၎င်းသည်မယုံနိုင်လောက်အောင်လိမ္မာပါးနပ်သောလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဖြစ်သည်</text>
<text sub="clublinks" start="431.11" dur="6.22"> Raimi Spider-man ရုပ်ရှင်ကားများ၏ပရိသတ်များနှင့် Andrew Garfield ၏ Spider-man ရုပ်ရှင်ဗားရှင်းများရပ်တန့်သွားသည်</text>
<text sub="clublinks" start="437.33" dur="3.86"> Lure, ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့ကိုသူတို့ထဲကတစ်ခုခုကိုနှင့်အတူစစ်မှန်သောသဘောတူညီချက်မဟုတ်, ဒါပေမယ့် teasers</text>
<text sub="clublinks" start="441.19" dur="4.71"> ရုပ်ရှင်တွေပိုများလာတာဟာတကယ့်ကိုကောင်းတဲ့လှုပ်ရှားမှုပါ။</text>
<text sub="clublinks" start="445.9" dur="6.299"> Sony သည်၎င်းကိုအတည်ပြုခြင်းမရှိကြောင်းမေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်လာသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ကိုကြီးမားသောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးလှုပ်ရှားမှုဖြစ်လိမ့်မည်</text>
<text sub="clublinks" start="452.199" dur="3.351"> ဒါပေမယ့်ငါစိတ်ကူးကြည့်နိုင်တယ်၊ ကောလဟာလတွေမှန်ရင်မင်းသရုပ်ဆောင်တွေတကယ်ပဲလုပ်တယ်</text>
<text sub="clublinks" start="455.55" dur="5.99"> အလွန်တိုတောင်းသောသူတို့သာသူတို့ထံမှမျှော်လင့်ထားသည့်၎င်းတို့၏ကြီးမားသောအခန်းကဏ္ instead အစားအစား cameos သာရ</text>
<text sub="clublinks" start="461.54" dur="1"> အလိုတော်</text>
<text sub="clublinks" start="462.54" dur="4.409"> တ ဦး တည်းမှာ Tom's Spidey မတိုင်မီတတိယမြောက်လုပ်ရပ်၌သာဖြစ်သည်</text>
<text sub="clublinks" start="466.949" dur="2.411"> နှင့်အလားအလာမိုင် Morales လှည့်။</text>
<text sub="clublinks" start="469.36" dur="4.99"> အကယ်၍ ဒီလိုမျိုးဖြစ်ပျက်လာရင်၊ သက်ကြီးရွယ်အို ၂ ယောက်ကိုဖြစ်နိုင်တယ်</text>
<text sub="clublinks" start="474.35" dur="5.32"> အရောင်းအ ၀ ယ်အလွန်နောက်ကျသောရူးသွပ်ခြင်းကိုကျန်းမာရေးနှင့်မညီညွတ်သည့်အဖြစ်ကြီးကြီးမားမားနှင့်ဒုတိယအစောဆုံးအချိန်တွင်စဉ်းစားခဲ့ကြသည်</text>
<text sub="clublinks" start="479.67" dur="4.58"> သို့မဟုတ်ရုပ်ရှင်အဘို့အတတိယနောက်တွဲယာဉ်ကိုမဖြန့်ချိမီမကြာမီကဲ့ရဲ့ရပါမည်။</text>
<text sub="clublinks" start="484.25" dur="4.46"> Sony ကသူတို့ရဲ့ trailers တွေကိုဘယ်လိုဒီဇိုင်းလုပ်ပုံကိုစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်၊</text>
<text sub="clublinks" start="488.71" dur="5.41"> - ဒါပေမယ့်ရုပ်ရှင်မထွက်ခင်လနဲ့လအနည်းငယ်မကပါ။</text>
<text sub="clublinks" start="494.12" dur="6.44"> သို့သော်သတိရပါ - လက်ရှိတွင်ကောလဟာလများသာမဟုတ်၊ အချို့သူများကအခြားသူများထက် ပို၍ ယုတ္တိတန်သည်ဟုဆိုရမည်</text>
<text sub="clublinks" start="500.56" dur="4.45"> သူတို့ကိုယ်သူတို့အတည်ပြုမယ်ဆိုရင်အေးအေးဆေးဆေးပဲ - Snoke ဟာတကယ်တော့ Darth လည်းမဟုတ်ဘူး</text>
<text sub="clublinks" start="505.01" dur="3.76"> Tony Stark သည် Vader ၏အမှောင်ထုနှင့် Mace Windu ၏သားမဟုတ်သည့် Finn ဖြစ်သည်</text>
<text sub="clublinks" start="508.77" dur="4.849"> Infinity ဟာမသေဆုံးသေးပါဘူး။ Mysterio ဟာနောက်ဆုံးတော့မကောင်းတဲ့ကောင်ပဲ</text>
<text sub="clublinks" start="513.619" dur="1.26"> အခြားစကြာ ၀ universeာ။</text>
<text sub="clublinks" start="514.879" dur="5.34"> ဒီရုပ်ရှင်အမျိုးအစားမှရုပ်ရှင်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောလဟာလများစွာနဲ့ထင်မြင်ချက်တွေကတိကျမှန်ကန်နေဆဲဖြစ်သည်</text>
<text sub="clublinks" start="520.219" dur="4.48"> ကောလာဟလများနှင့်ထင်မြင်ချက်များ။ ဒီတော့ဒါကိုမျှော်လင့်ခြင်းတစ်ခုအဖြစ်မယူမှတ်ပါနှင့်</text>
<text sub="clublinks" start="524.699" dur="4.291"> Tobey Maguire နှင့် Andrew Garfield တို့သည်ဤနေရာတွင်ကစားနေသည်။</text>
<text sub="clublinks" start="528.99" dur="7.339"> Venom နှင့် Sony Spider-Man Cinematic Universe မှဇာတ်ကောင်များ၏ကျန်</text>
<text sub="clublinks" start="536.329" dur="1.63"> ငါကအကြောင်းအများကြီးပိုပြီးယုံကြည်မှုပါပဲ။</text>
<text sub="clublinks" start="537.959" dur="4.181"> သင်ဘယ်လိုထင်ပါလဲ? ယိုစိမ့်မှုတစ်ခုခုရှိပါသလား။ ယုံကြည်သည်</text>
<text sub="clublinks" start="542.14" dur="7.53"> ဤကဲ့သို့သောရုပ်ရှင်ကိုတည်ဆောက်ခြင်းသည်အဓိပ္ပာယ်ရှိသလောသို့မဟုတ်အလွန်ရှုပ်ထွေးစေသည်။</text>
<text sub="clublinks" start="549.67" dur="3.303"> မှတ်ချက်များတွင်ကျွန်ုပ်အားအသိပေးပါ။ algorithm အတွက်ဗီဒီယိုကိုကြိုက်နှစ်သက်ရန်မမေ့ပါနှင့်</text>
<text sub="clublinks" start="552.973" dur="4.567"> ဒီဗီဒီယိုကိုထောက်ခံသင့်တယ်ဆိုတာပြသနိုင်ဖို့မဟုတ်ရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်</text>
<text sub="clublinks" start="557.54" dur="4.729"> စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းအတွက်နောက်တစ်ခေါက်သင့်ကိုတွေ့လိမ့်မည် - rinjehaun!</text>